Naya Drishti | सुदुरपश्चिममा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनको गृहकार्य सुरु, को बन्दै छ - मुख्यमन्त्री ? - Naya Drishti सुदुरपश्चिममा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनको गृहकार्य सुरु, को बन्दै छ - मुख्यमन्त्री ? - Naya Drishti
जेठ ०१, कैलाली । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भए संगै माओवादी बाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको कुर्सि हल्लिएको छ । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले अब प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बताएका छन् । ‘अब सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्छ ’उनले भने, ‘हामीले गृहकार्यमा सुरु गरिसकेका छौं ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अब नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना प्रवल भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीचको सहमतिले सुदूरपश्चिममा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुलेको हो ।
जनता समाजवादी पार्टीका दुवै जना सांसद पूर्व राजपा अर्थात् महन्थ-राजेन्द्र पक्षका भएका कारण प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्ने पक्का भएको हो । ‘२५ जना सांसद रहेको पार्टीले सरकारको नेतृत्व नगरेर १३ जना सांसद रहेको पार्टीलाई नेतृत्व दिने कुरा हुँदैन,’ पूर्व मन्त्री समेत रहेका एमालेका एक नेताले भने, ‘अब हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’
उनले केन्द्रमा शीर्ष नेताहरू बिचको निर्णायक संवादले प्रदेश सरकार परिवर्तनको बाटो खुलाएको बताए । ‘यस अघि पनि हामीले एमालेबाटै नेतृत्व हुनुपर्छ भनेका थियौँ’ उनले भने ‘अब त्यो सम्भव भएको छ । केन्द्रबाटै यसको निर्देशन आउला ।’
सभामुख बाहेकका २४ जना सांसद मध्ये नेपाल समूहका १८ जना र ओली समूहका ६ जना मात्रै थिए । प्रदेश सरकार गठन गर्न २७ जना सांसद आवश्यक पर्छ एमालेको २५ र जसपाका २ जना सहितको सरकार बन्नेमा एमालेकै सांसदहरू पनि ढुक्क हुन थालेका छन् ।
‘ओली पक्षका सांसदहरू बलियो भएको भए उहिल्यै सरकार ढालिसक्थे,’ नेपाल समूहका एक सांसदले भने ‘हामी बलियो भएका कारण यो सरकार रहेको हो । एक भएपछि हामी नै सरकारको नेतृत्व गर्छौं ।’ नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले पनि अब प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बताएका छन् । ‘अब सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्छ ’उनले भने, ‘हामीले गृहकार्यमा सुरु गरिसकेका छौं ।’
केन्द्रमा प्रम केपी ओलीले विस्वासको मत लिदै गर्दा अनुपस्थीत् भएका थिए । गत सोमबार नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि ओली सरकार ढलेको थियो । तर माधब पक्षले सामुहिक राजिनामा नदिएपछि पुन ओली नेतृत्वमै नया सरकार गठन भएको छ । माधब पक्षका कम्तिमा २० बढी सांसदले राजीनामा दिए नयाँ सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने अपेक्षामा कांग्रेस थियो।
त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न दलहरूलाई समय दिएकी थिइन्। तर तोकिएको समय भित्र बहुमत दावी गर्न नसकेपछि देउवाले नयाँ सरकारको दाबी गरेनन । नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आज चपलीहाइटस्थित रामेश्वर थापाको घरमा झन्डै चार घण्टा छलफल गरेका थिए। त्यहाँबाट निस्कँदै नेता नेपालले दुई/चार दिनका लागि राजीनामा टरेको र पार्टीभित्रका विवाद हल गर्न कार्यदल बनाएर जाने सुनाएका थिए।
यसरी भएको ओली नेपाल वार्ताको प्रभाव सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि देखिने भएको छ । तर एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाए मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।